Adeegyada Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Adeegyada Ganacsiga Yaryar
Caawinta ganacsiyada yaryar ee Washington
Ka sokow diiradda qaybaha muhiimka ah, horumarinta ganacsiga iyo kaalmada dhoofinta, Wasaaradda Ganacsiga waxay bixisaa adeegyo ganacsi oo kala duwan oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha kala duwan ee shirkadaha Washington, laga bilaabo waxbarashada iyo tababarka illaa amaahda ganacsiga, kaalmada dhoofinta iyo qorsheynta dhibaatooyinka.
Kheyraadka ganacsiyada iyo kuwa aan macaash doonka aheyn ee ay saameysay COVID-19
Ganacsigu wuxuu maamushaa gargaarka federaalka ee COVID-19 wuxuuna taageeraa maalgelinta ganacsiyada aadka u saameeyay iyo kuwa aan macaash doonka ahayn.
Waxbadan ka baro ilaha kale ee aad heli karto.
Cabirka: SizeUp waxay bixisaa qalab casri ah oo lagu baaro qalabka kaa caawinaya inaad turxaan bixiso qaabkaaga ganacsi, cadeyso tartamayaasha, raadiso alaab-qeybiyeyaasha, sameyso istiraatiijiyado xayeysiis iyo waxyaabo kale oo badan Waad socodsiin kartaa xaalado kala duwan, adoo isbarbar dhigaya ganacsigaaga kuwa kale ee aagga si aad u aragto sida qiimahaaga, shaqaalayntaada, odoroska dakhligaaga iyo istaraatijiyadaha suuqgeynta ay isugu soo ururayaan, una dhameystirayaan isbarbardhiga xogta deegaanka, gobolka, gobolka iyo Mareykanka.
Akadamiyadda Ganacsi: Akadamiyadu waxay kuu marinaysaa 11 cashar oo loogu talagalay inay ku baraan xirfadaha lagama maarmaanka ah ee aad u baahan tahay si aad u noqoto guuleyste, kalsooni leh milkiile ganacsi oo yaryar Cashar kasta waxaa ka mid ah fiidiyoow uu khabiir ku takhasusay mowduuca, buugga shaqada, shaqooyinka iyo kedisyada.
ScaleUp: Milkiileyaasha ganacsiyada yaryar waxay ka qaybgalaan 35-saacadood oo tababar ah fasalka goobta si loo hagaajiyo howlaha maaliyadeed, loo yareeyo kharashyada hawlgalka loona barto sida ugu habboon ee loogu tartamo suuqa.
Barwaaqo!: Bartilmaameedka shirkadaha heerka labaad, barnaamijkan wuxuu qaadaa qaab ganacsi oo ku wajahan barwaaqada gobolka. Badanaa waxaa loo yaqaan "ka soo baxa gudaha" istaraatijiyad, waxay ka caawisaa shirkadaha jira inay kordhiyaan dakhliyada sida ugu badan 10 ilaa 20%. Marka la barbardhigo kaalmada ganacsiga dhaqameed, baraaraan! wuxuu diiradda saarayaa sidii looga qaadi lahaa isbaarooyinka kororka sida horumarinta suuqyo cusub, turxaan bixinta moodooyinka ganacsiga, isku toosinta howlaha gudaha iyo helitaanka sirdoonka tartanka.
Dib u bilaw Akademiyada: Dib u dhiska iyo dib u bilaabida ganacsigu waa shaqo adag, gaar ahaan marka labaad ama mar saddexaad. Fiidiyowyadan taxanaha ah, buugaag shaqo iyo meelayntu waxay kaa caawin doonaan inaad gaadho diiradda, qaadashada go'aamo xog ogaal ah, ka faa'iidayso fursadaha suuqa cusub iyo dib-u-xoojinta.
Caawinta Dhoofinta Ganacsiga Yaryar: Ganacsigu wuxuu abuuraa koox khubaro ah oo kaa caawin kara inaad gasho dhoofinta ama aad u ballaariso suuqyo cusub oo adduunka ah. Adeegyadan waxaa ka mid ah caawimaad farsamo, cilmi baaris, isku dheelitirnaan, bandhigyo ganacsi iyo ergooyinka ganacsiga ee suuqyada muhiimka ah ee adduunka.
Dhoofinta Barnaamijka Foojarka: U qalmida ganacsiyada yaryar ee Gobolka Washington waxaa loo celin karaa ilaa $ 10,000 howlaha la xiriira dhoofinta, oo ay ku jiraan bandhigyada ganacsiga iyo khidmadaha howlaha ganacsiga, safarka, adeegyada turjubaanka iyo tarjumaadda, tababarka, shahaadooyinka caalamiga ah iyo kuwo kale.
Khariidadda nidaaminta: Wasaaradda Ganacsiga waxay iskaashi la leedahay hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa gobolka si ay gacan uga geysato hagaajinta khibradda sharciyeed ee ganacsiyada si ay uga furaan ama ugu ballaadhi karaan magaalooyinka dhammaan Gobolka Washington. Hadafka barnaamijku waa in la wanaajiyo dhaqaalaheena inta la abuurayo shaqooyin. Mashaariicda bilowga ah waxaa diirada lagu saaray maqaayada, wax soo saarka iyo qeybaha dhismaha.
Suuqa Hawlgabka: Suuq internet ah oo shirkadaha adeegyada maaliyadeed ee aqoonta leh u fidiyaan qorsheyaal keyd hawlgab qiimo jaban ganacsiyada iyo shakhsiyaadka, oo ay ku jiraan mulkiileyaasha keligood ah, shaqaalaha "gig" iyo kuwa iskood u shaqeysta. Suuqa Hawlgabku wuxuu fududeynayaa habka lagu helo qorshaha keydinta howlgab iyadoo sahleysa in la isbarbar dhigo qorshooyinka gobolka uu ansaxiyay.
Deeqaha Ganacsiga Yaryar: Markii lacag la helo, Ganacsigu wuxuu deeqo siiyaa ganacsiyada yaryar ee ay saameeyeen masiibada iyo saamaynta ay ku leedahay dhaqaalaha. Deeqahaasi waxay ku qoran yihiin mareegahayaga CommerceGrants.com.
Sanduuqa Flex ee Ganacsiga Yaryar: Waxaa taageeray Ganacsiga iyo hay'adaha maaliyadeed ee bulshada, Sanduuqa Flex wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn inay helaan illaa $ 150,000 oo ah amaah dulsaar ah oo loo adeegsan karo mushahar bixinta, korontada, kirada, sahayda, suuqgeynta, xayeysiiska, hagaajinta dhismaha, dayactirka iyo kharashyada kale ee ganacsiga .
Xikmad Bilaabasho: Tilmaamahan anfacaya wuxuu ka kooban yahay 27 xeelado kala duwan oo ganacsatadu u adeegsan karaan inay ku helaan raasamaal ganacsi, laga bilaabo dhaqan dhaqameed aad u sarreeya illaa kuwa sanduuqa ka baxsan. Waxaa ku jira faa iidooyinka iyo qasaaraha istiraatiijiyad kasta iyo sidoo kale daraasad kiis.
Hindisaha Dhibcaha Ganacsiga Yaryar: Sharciga Shaqooyinka Yaryar ee Ganacsiga sanadkii 2010 wuxuu u ogolaaday gobolada inay abuuraan barnaamijyo cusub oo si gaar ah loogu talagalay baahiyaha ganacsiyada yaryar ee raba inay koraan oo ay ballaadhaan. Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay la shaqeysay hay'ado maaliyadeed oo gaar loo leeyahay si loo abuuro saddex barnaamij oo cusub oo $ 19.7 milyan oo maaliyad ah ay $ 300 milyan oo caasimad cusub u geyn doonto ganacsatada yaryar ee Gobolka Washington dhammaadka sannadka soo socda.
Kheyraadka Bilowga & Ganacsadaha: Kheyraadkan khadka tooska ah waxaa ku jira macluumaad iyo ilo qoto dheer oo loogu talagalay ganacsatada, shirkadaha bilowga ah iyo ganacsiyada yaryar, oo ay ku jiraan maalgelinta ilaha, tababarka iyo kaalmada farsamada, la-talinta, waxbarashada iyo macluumaadka.
Bisha Ganacsiga Caalamiga ah: Nofeembar kasta, wada-hawlgalayaashayada ku baahsan gobolka oo dhan waxay qabtaan aqoon-isweydaarsiyo, aqoon-isweydaarsiyo iyo tartamo si loogu muujiyo degganeyaasha fikradda lahaanshaha iyo socodsiinta meheraddooda. Waa hab fiican oo lagu ogaan karo waxa ay u baahan tahay in lagu socodsiiyo ganacsi iyo soo xaarka fikradaha cusub.
Xarumaha Bilowga: Xarumaha Bilaabashadu waxay siiyaan ganacsatada, shirkadaha bilowga ah iyo ganacsiyada yaryar qayb la-talin, latalin, iyo barnaamijyo waxbarasho iyo adeegyo loogu talagalay in lagu boodo oo lagu kobciyo ganacsiyada maxalliga ah. StartUp NCW ee Wenatchee waxay kuxirantahay Waaxda Ganacsiga laakiin la-hawlgalayaasha dhaqaalaha ee Washington oo dhan waxay ka shaqeeyaan xarumo kale oo bilow ah.
Sida loo Hagayo
Buugga Ciyaaraha Yar Yar: Haddii aad ka fekereyso inaad ganacsi furto, u wareejinta howlahaaga Gobolka Washington ama aad qorsheyneyso inaad maal gashato mid ka mid ah ganacsiyada guuleysta ee gobolka, Buugga Ciyaaraha Yaryar ee adiga ayaa adiga kuu ah. Waxaa ka buuxa aragtiyo dhab ah, macluumaad iyo casharro laga bartay, oo uu qoray milkiile ganacsi yaryar ee Gobolka Washington.
Markay Dhibaato dhacdo - Qorsheeye Dhibaato u ah Ganacsiyada Yaryar: Masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dad sameeba waa lama huraan. In kasta oo aadan ka hortagi karin carqalad kasta oo ku timaada meheraddaada, waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid si aad u yareyso suuragalnimadooda ama saameyntooda. Marka Dhibaatooyinka Shaqo ay ku siiso habab la caddeeyey oo lagu garto lagana takhaluso carqalado iman kara iyo sidoo kale waxyaabaha aad sameyn karto si aad dib ugu soo kacdo oo aad u socotid wixii ka dambeeyay.
Meheradda Yaryar / Bilaabashada
Xafiiska Xoghayaha Arimaha Dibada
Qeybta Amniga Shaqada
Waaxda Shaqada & Warshadaha
Xiriirinta Ganacsiyada Yaryar ee Gobolka Washington